Mobile Archives - Knowledgeworms
August 8, 2021 August 8, 2021 AuroraLeaveaComment on ကိုယ်မသိသေးတဲ့ သက်ရှိတွေကို လေ့လာနိုင်မယ့် App တခု
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် သက်ရှိ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၈.၇ သန်းလောက် ရှာဖွေ တွေ့ရှိပြီးဖြစ်ကာ နောက်ထပ် မသိရသေးတဲ့ သက်ရှိတွေလည်း အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။
August 4, 2021 August 4, 2021 AuroraLeaveaComment on Android ဗားရှင်းအဟောင်း Gingerbread များတွင် Google service များ ပေးမသုံးတော့
သင့်ကို လွမ်းဆွတ်တဲ့ ခံစားချက်အတွက် သုံးနေသည်ဖြစ်စေ၊ စက်ပစ္စည်းတခုကို အကြာကြီး သုံးတတ်လို့ပဲ ဖြစ်စေ ဆယ်စုနှစ်တခု ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Android Gingerbread ကိုသုံးနေဆဲ ဖုန်းများကို နှုတ်ဆက်ချိန် ရောက်လာပါပြီ။
တခါတရံမှာ webcam အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက webcam တစ်လုံးအတွက် တန်ဖိုးတစ်ခု‌ တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ ကင်မရာအရည်အသွေးကောင်းပြီး မသုံးဖြစ် တော့တဲ့ ဖုန်းအဟောင်းတစ်လုံးရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်စေ ဖုန်း stand လေးတစ်ခုနဲ့တင် အရည်အသွေးအသင့်အတင့်ရှိတဲ့ webcam တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချလို့ရပါတယ်။ Android ဖုန်းများအတွက် Google Playstore မှ DroidCam ကို download ဆွဲပါ။ 2. ထို့နောက် ကွန်ပျူတာအတွက် dev47apps website မှတွင် download ဆွဲပြီး Install လုပ်ပါ။ 3. ထည့်ပြီးတာနဲ့ DroidCam ကို Android ဖုန်းရော Windows PC မှာပါဖွင့်ပါ။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် Network ဟာ WIFI မှာဖြစ်ပါက […]